रेमिट्यान्सले बिगारेका यी गाउँहरु ! | News Dabali
रेमिट्यान्सले बिगारेका यी गाउँहरु !
September 18, 2012 | 11:03 am
“आज हरियो तरकारी छैन सर, मस्यौरा पकाउँछु है” होटल सञ्चालकले यसो भनेपछि हामीले हुन्छ भन्नुको विकल्प पनि थिएन र स्वीकृति जनायौं ।
खाना खाएर केहीबेर गाउँतिर टहल्न निस्कियौं । वरिपरि खेतीयोग्य जमीन, मुहानको धारा, नजिकै बाह्रमासे नदी देखेपछि मसँगै रहनुभएका हरि दाईले भन्नु भयो “यहाँका मान्छे नम्बरी अल्छी रछन् भाइ ।” उहाँको टिप्पणी ठिकै थियो । हुन पनि, आफ्नै खेतबारी र सिंचाइ सुविधा भइकन पनि खुर्सानीसमेत बजारबाट झिकाउने किसान समुदाय देख्दा उहाँजस्तै विचार सबैमा आउँदो हो ।
चोकतिर डुल्दै आउँदा परनिर्भरताको थप प्रष्ट तस्वीर देखियो । दुईजना महिला डालीमा तरकारी बेच्न बसेका रहेछन् । उनीहरुको डालीमा घिरौला, फर्सी र गोलभेंडा थिए । तर बासी, ओइलाएर चाउरी परेका । ‘हप्तामा एक दुईपल्ट किनेर ल्याउँछौ, बासी त भइहाल्छ नि ‘ तरकारी बेच्दै गरेकी एकजना बोलिन् ।
तरकारी लटरम्म हुनसक्ने यहाँका किसानको दैनिकी अनौठौ महसुस भयो । दुईचार दिन गाडी चलिदिएन भने यहाँका बासिन्दाको मुखमा हरियो तरकारी पर्न हम्मे पर्छ । सागपात, घिरौला, लौका, फर्सीजस्ता सजिलो खेती हुने बालीसमेत गर्ने चलन त्यति देखिएन यहाँ । सिराहाको गोलबजार र मिर्चैंयाले यहाँका बासिन्दालाई तरकारी खुवाइरहेको छ ।
उदयपुर जिल्लाको बेलसोत गाउँमा देखिएको यो दृष्य अहिले सामान्य भइसकेको छ । खाद्यान्न एवं तरकारीको भण्डार मानिएको तराइका अधिकांशः जिल्लामा यस्तो कृषि परनिर्भरता चुलिंदै गएको छ । सिराहाको मिर्चैयादेखि ७ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने यो गाउँ ओखलढुंगा, खोटांङ, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लाको नाका हो । कृषि उब्जनीको दृष्टिले उपयुक्त यो गाउँमा सिंचाइको लागि बाह्रमासे कमला नदी यहीं भएर बग्दछ । प्रायः घरमा मुहानको पानी छ । इनार र बोरिङको समस्या छैन । अन्यत्रजस्तो लोडसेडिङको मार पनि कमै छ यहाँ । यातायातको पुरै सुविधा छ । दैनिक संयौंका संख्यामा बस, ट्रक, जीपहरु यही गाउँ भएर गुड्छन् । सदरमुकाम गाइघाट, पूर्वमा धरान, काकडभिट्टा, पश्चिममा बीरगँजदेखि काठमाण्डौंसम्मका सोझो बससेवा छ । सडक पीच छ ।
यो त भयो, पहाडसित सम्मुख गाउँको कुरा । तरकारीको लागि नामी सर्लाहीको लालबन्दी बजारसमेत परनिर्भर हुन थालिसकेको छ । कुनैबेला यहाँबाट बसको छतभरि गोलभेंडा, काउलीहरु भरिएर जान्थे तर अहिले यो क्रम घटेको छ । मकवानपुर, काभे्र, धादिंङजस्ता जिल्लामा उत्पादित तरकारीको बजार भएको छ लालबन्दी । भारतीय आलु, प्याज, चाइनिज लसुन नआए किसानकै तरकारीमा मिसाउने मेलो हुँदैन । खासगरी, बेमौसमी तरकारीहरु आयात हुन थालेकोमा अहिले मौसमी तरकारीसमेत आउन थालेको छ । जबकि, बेमौसमी तरकारीको लागि पनि यहाँ खराब वातावरण छैन ।
कृषिबालीको भण्डार तराइमै यस्तो परनिर्भरता बढ्नुको पछाडि केही कारण छन् । खासगरी, रेमिट्यान्सको नकारात्मक प्रभाव । खेतीकिसानीमा खट्ने युवाहरु धेरैजसो विदेशिएका छन् । विदेश जान नपाएकाहरु नेपालकै सहर बजारतिर पुगेका छन् । घरगाउँमै इलम गरेर बस्दा केही गर्न नसक्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रित हुनुपर्ने सामाजिक डरले पनि युवाहरु पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन् । उनीहरुको नियमित कमाइले घरका मानिसहरु भने अल्छी र सौखिन भइरहेका छन् । विदेशको कमाइले घरमा सौखका सामान जोड्ने अभिपे्ररणा वृद्धि भइरहेको छ । बढी कमाइ हुँदा सहर बजारतिर घरघडेरी जोड्ने चाहनाले प्रश्रय पाएको छ । गाउँमै महिनापिच्छे करोडौं रेमिट्यान्स भित्रिन थालेपछि बाहिरबाट झिकाइएका तरकारी, फलफूल र अनाज खाने सोख पलाएको छ । आफ्नै खेतखलिआनमा उब्जिने रामविलास, सोना मन्सुली र गद्यरजस्ता धान कौडीको भाउमा बेचेर सहरमा प्याक गरिएका जीरा मन्सुली खाने चलन बढेको छ । ग्रामीण खान्कीलाई नयाँ पुस्ताले मनोरञ्जनको लागि मात्र चाख्ने अवस्था आएको छ । प्रति लिटर २५ रुपैंयाँमा दूध बेचेर २५० मिलिलिटरको कोकलाई ३५ रुपैंयाँ तिर्न ग्रामीण नागरिकमा तत्परता हावी भएको छ । अर्थात्, मौलिक उत्पादन हेपिएको र आयातित खाद्यान्नमा रमाउने चलन स्थापित भएको छ ।
घरपरिवारका मानिसहरु एकातिर परिवारमा युवाशक्ति नभएर कुटोकोदालो गर्न नपाएको दुखेसोमा छन् । कतिपय परिवारमा भने महिनापिच्छेको विदेशी कमाइले कुटोकोदालो नै गर्नुपर्ने अभिपे्ररणा तथा वाध्यता पनि नभएको अवस्था छ । अहिले युवाशक्ति विदेशिंदा गाउँमा धेरैजसो जमीन बाँझो छन् । कतिपय खेतीयोग्य जमीन घडेरीको रुपमा टुक्रिएको छ । विदेशको कमाइले एउटा पक्की घर, घर नभएपनि घडेरी त किन्नैपर्ने सामाजिक मान्यता तथा दवाबले कृषियोग्य जमीनको खण्डीकरण भइरहेको छ । अहिले लालबन्दी र बेलसोतहरुमा सहरी बजारको हाराहारीमा जमीनको भाऊ पुगिसकेको छ । कुनैबेला विगाह र कट्ठामा जमीनको स्वामित्व हुने चलन कटौती भइरहेको छ । धूर र आनामा जमीन खण्डित भइरहेको छ । लहलह धानको बाला झुल्ने जमीनमा इँटाको घर ‘फल्न’ थालेपछि कृषि परनिर्भरता नहुने कुरै भएन । हरेक महिना प्रत्येकजसो गाउँमा दस वीसवटा नयाँ घर थपिएका छन् । अहिले विदेशिने अधिकांश युवा र तिनका परिवार एउटा राम्रो घर बनाउने, नसके सहरमा एउटा टुक्रा भएपनि घडेरी जोड्ने ध्याउन्नमा पाइन्छन् ।
नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा विदेशिनको संख्या जति बढ्दैछ, त्यति नै रेमिट्यान्सको गति पनि बढेको छ । विदेशमा खासगरी, खाडी मुलुकमा नेपालीले गर्ने आर्जनले देशको प्रमुख आयस्रोत कायम भएको छ । वास्तवमा नेपालको बजेट संरचना रेमिट्यान्सको प्रवाहदरमा स्थापित भएको तथ्य मान्नैपर्ने हुन्छ । एउटै भएपनि अथाह रुपमा आएको यो आयस्रोतले देशको बजेटमा प्रभाव पार्नु सकारात्मक हो । खासगरी, ग्रामीण वस्तीबाट खाडी पुग्नेहरु भएकोले रेमिट्यान्सको प्रभाव ग्रामीण जनजीवनमा पर्नु स्वाभाविक हो । ग्रामीण गरिबीलाई थोरै भएपनि आर्थिक हैसियत जुटेको छ भने कतिपय ग्रामीण जनजीवनमा विकासका न्यूनतम पूर्वाधारहरु जुटिरहेको छ । तर समग्रतामा यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउनुको साटो उपभोक्तावादलाई सर्वाधिक उचाइ प्रदान गरिरहेको छ । देशवासीलाई प्रत्युत्पादक रुपमा अल्छी र सोखिन बनाइरहेको छ । यद्यपि, उपभोक्तावादले जन्माएको मागको आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट पूरा हुने वातावरण सिर्जना गरिनुको साटो भारत, चीन तथा अन्य तेस्रो मुलुकको उत्पादनले बजार पाइरहेका छन् । मुलुक अनि समाजको दिगो आर्थिक समृद्धिको नीतिगत एवं कार्यगत जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दल र सरकारहरुको लाचारी हो यो । उनीहरुको यस्तै लाचारीले नेपाली अर्थतन्त्र खासगरी कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता चिन्ताजनक रुपमा अघि बढिरहेको छ । बेलैमा राजनीतिक दल र सरकारहरुमा चेत खुलोस् । हामीले पनि नागरिक दवाब दिने तत्परता जुटाऔं ।
(लेखक कर्मणा कृषि फार्म, जब्दी, सर्लाहीका प्रबन्ध निर्देशकसमेत हुन् ।)